“सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” कथासङ्ग्रहका समीक्षाहरू | मझेरी डट कम
“सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” विजु सुवेदी ‘विजय’का अढाई दर्जन कथाहरूको सङ्ग्रह हो । सामाजिक कथाहरूको बोलवाला रहेको सङग्रहमा प्रेम कथाहरू पनि समेटिएका छन् । सङ्ग्रहमा आन्दोलन सम्बन्धी कथाहरूलाई पनि उत्तिक्कै स्थान दिइएका छन् । एउटा विज्ञान कथा पनिरहेको सङ्ग्रहमा विषयगत विविधता पाइन्छन् ।
२०७२ साउन ३०
‘कोसेली’ शनिवासरीय साहित्यिक परिशिष्टाङ्क
२०७२ भदौ १२
नागरिक राष्ट्रिय दैनिक
‘अक्षर’ शनिवासरीय साहित्यिक परिशिष्टाङ्क
फरक किसिमको कथा सङ्ग्रह
— ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
नेपाली साहित्यमा एउटा फरक सङ्ग्रहले प्रवेश पाएको छ । केही कथा जस्तो, केही निबन्ध जस्तो त केही संस्मरण जस्तो लाग्ने भए पनि आखिर यो कथा नै हो । यो अनौथो खालको कथालाई कथा सङ्ग्रहको रुप दिने जमर्को गरेका छन्, युवा साहित्यकार एवं पत्रकार बिजु सुवेदी “विजय”ले । २८वटा कथाहरू समेटेर प्रकाशन गरेको यस सङ्ग्रहको नाम हो “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” ।
पाठकले नयाँपनको आभास पाउनु रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको यस कथा सङ्ग्रहको विशेषता हो । माओवादी जनयुद्धताका जनताले भोग्नु परेको दोहोरो मार, समाजमा छोरीमाथि हुने गरेका अन्याय, भेदभावलगायतका विषयसहित भूकम्प र यसको त्रास अनि विश्वमा बढ्दै गरेको जनसंख्या र यसले पार्नसक्ने खाद्य अभावलाई पनि कथाकारले घतलाग्दो पाराले उठाएका छन् । कथा ‘साइकलले घनिष्ठ बनायो’मा मानिसका बीचको आपसी सम्बन्धलाई उजागर गर्न खोजिएको छ । ‘इज्जतको बिहे’ कथामा समाजमा कायम रहेको दाइजो प्रथाले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई उतार्न खोजिएको छ । त्यस्तै ‘अत्याचारी फातुक’मा कुनैपनि परिवर्तनका लागि हतियार नै उठाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ गलत रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘इथिक्सको वैज्ञानिक चमत्कार’ शीर्षकको कथामा वातावरणीय उष्णताको समस्यालाई उठाइएको छ । ‘जय मातृभूमि’ र ‘समृद्ध नेपाल’ शीर्षकको कथा देशभक्तिले ओतप्रोत भएका कथाहरू हुन् । ‘डल्ले र डल्ली’ कथा समाजमा ब्याप्त अल्छीपनाको उजागर गर्ने खालको कथा हो ।
त्यस्तै “मैना सुनार” यथार्थपरक कथा हो । यसमा जनयुद्धको समयमा काभ्रे जिल्लाको पाँचखालस्थित ब्यारेकमा माओवादीको बिल्ला भिराएर एउटी निर्दोष बालिकालाई सेनाले अपहरणपछि बलात्कार गरेर हत्या गरिएको यथार्थ विषय उठाइएको छ । ‘बच्चा जन्मँदा’ कथा पारिवारिक कथा हो भने ‘म झनै भगवान्को भक्त भएछु’ कथा भूकम्पको त्रासले गर्दा उत्पन्न मानसिक प्रभावको विषय उतारिएको कथा हो । ‘नेता’ शीर्षकको कथामा नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ । त्यसै गरी ‘प्रेमिकालाई पत्र’ र ‘विचरा विनोद’ प्रेम विषयले ओतप्रोत कथाहरू हुन् ।
यस्ता थुप्रै कथाहरू छन् । जति पढ्यो त्यत्ति पढिरहुँ लाग्ने र अब यसपछि के होला ? भन्ने कौतुहल जगाउने खालका कथाहरू यस सङ्ग्रहमा छन् । तर लघुकथालाई पनि कथा माान्नु र खण्डकाव्यलाई पनि कथा मान्नखोज्नुले पाठकलाई भ्रममा पार्न सक्छ । तर जे छन् सन्देशमूलक नै छन् । यो कथा सङ्ग्रह वास्तविकजस्तै लाग्नेछ । “तपाईंले जति कष्ट दिनुहुनेछ त्यत्ति नै मलाई ऋण चुक्ता गर्न सजिलो हुनेछ” भन्ने उनको मान्यताले कथालाई थप रोचक बनाएको कुरामा भने गर्व गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् ।
२०७२ भदौ १९ शनिवार
नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक
ऐतिहासिक पुस्तक बन्ने सम्भावना
— जनार्जन पौडेल
नेपाली साहित्य र पत्रकारितामा एउटा चिरपरिचित व्यक्तित्त्व हुन् विजु सुवेदी ‘विजय’ । पत्रकारिता र लेखनमा डेढ दशकभन्दा बढी समय बिताएका सुवेदीले आफ्ना लेखन र पत्रकारिताको लामो अनुभवहरूलाई बटुलेर एउटा उत्कृष्ट रचना तयार गरेका छन् जसलाई उनले ‘सत्य सङ्घर्षका कथाहरू‘ भनेर न्वारान गरेका छन् । यसभित्रका कथाहरू पनि शीर्षक झैँ सत्य सङ्घर्षका जस्ता नै देखिन्छन् । जसमा कतै विजुजीले स्वयंले भोगेका अनुभूतिलाई कथाको रुप दिइएको जस्ता बुझिन आउछन् भने धेरैजसो चाहिँ आम मानिसले भोग्दै आएका पीडा र वेदनाका कथाहरू प्रस्तुत छन् । केही कथाहरू नित्तान्त उनका जीवनका व्यक्तिगत अनुभूति जस्ता देखिन्छन् भने धेरैजसो कथाहरू भने लाखौं नेपालीका दैनिकीसँंग मिल्दाजुल्दा छन् । जे होस् नेपाली साहित्यमा एउटा फरक र उत्कृष्ट सङ्ग्रहले प्रवेश पाएको छ ।
दश वर्षे माओवादी जनयुद्वदेखि १९ दिने जनआन्दोलनसम्मका कथाहरू यसमा समावेश छन् । क्रान्तिकारीहरूको बलिदानको गाथा गाइएको यस भागलाई नै लेखकले सत्य सङ्घर्ष भन्न खोजेका होलान् जस्तो लाग्दछन् । त्यसमा पनि “कैदी कमरेडको डायरी” शीर्षकको कथा धेरैको मन छुने कथा बन्न पुगेको छ । उनले पुस्तकको अन्तिममा ३१ नम्वरमा भएका कथाहरूको शीर्षक “सत्य सङ्घर्षका कथा” भने पनि यथार्थमा उनको सिङ्गो पुस्तकका सबै कथाहरू नै ‘सत्य सङ्घर्षका कथा’ जस्ता देखिन्छन् ।
झट्ट हेर्दा केही कथा जस्तो, केही निवन्ध जस्तो त केही संस्मरण जस्तो लाग्ने भए पनि आखिर यो कथा नै हो । लेखकले पुस्तकमार्फत राम्रा–राम्रा कथाहरूको कथासङ्ग्रहको रुप दिने जमर्को गरेका छन् । उनले यसमा २८ वटा कथाहरू समेटेका छन् कथाको विषय वस्तुहरू हेर्दा लाग्दछ उनको लामो समय देखिको मेहेनत र रचना हो यो । जसले नेपाली जनजीवनको सत्यतालाई उजागर गरेका छन् ।
हालै मात्र बजारमा आएको यस सङ्ग्रहलाई रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको छ । कथा पढ्दै जाँदा पाठकले नयाँपनको आभास पाउनु यस सङ्ग्रहको विशेषता हो । केही कथा निकै छोटा छन् त केही निकै लामा तर पढ्दै जाँदा पट्यारलाग्ने खालका कथा कुनै छैनन् । जुनसुकै कथा पनि पढ्दै जाँदा कौतुहलता जगाउने खालकै कथाहरू छन् । जसका अधिकांश कथाहरू कथा मात्र नभएर वास्तविकता जस्तै लाग्ने र हामै्र गाउँठाउँ समाजका यथार्थ कथा हुन् भन्ने पाठकलाई लाग्दछ । कथा पढ्दै जाँदा सबैलाई लाग्छ कि लेखकले वास्तविक घटनाहरूलाई कथामार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । माओवादी जनयुद्धताका जनताले भोग्नु परेको दोहोरो मार, समाजमा छोरीमाथि हुने गरेका अन्याय, भेदभावलगायतका विषय मात्र कथाकारले समेटेनन्, भूकम्प र यसको त्रास अनि विश्वमा वढ्दै गरेको जनसंख्या र यसले पार्न सक्ने खाद्य अभावलाई पनि उनले निकै घतलाग्दो पाराले उठाएका छन् ।
यसर्थ कथाकारले भन्न खोजेको कुरा यसरी बुझ्न सकिएला कि ! कथा ‘आमाको पुकार’मार्फत आमाको महिमाको वर्णन गर्ने देखि लिएर ‘साइकलले घनिष्ठ बनायो’मा मानिसका बीचको आपसी सम्बन्धलाई उजागर गर्न खोजिएको छ । ‘इज्जतको बिहे’ कथामा हाम्रो समाजमा कायम रहेको दाइजो प्रथा र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा उतार्न खोजिएको छ । त्यस्तै ‘अत्याचारी फातुक’मा कुनै पनि परिर्वतनका लागि हतियार नै उठाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ गलत रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । ‘इथिक्सको वैज्ञानिक चमत्कार’ शीर्षकको कथामा वातावरणीय उष्णताको समस्यालाई उठाइएको छ । ‘जय मातृभूमि’ र ‘समृद्ध नेपाल’ शीर्षकको कथा देशभक्तिले ओतप्रोत भएका कथा हुन् । ‘डल्ले र डल्ली’ कथा समाजमा व्याप्त अल्छीपनाको उजागर गर्ने खालको कथा हो । त्यस्तै ‘मैना सुनार’ यथार्थपरक कथा हो । यसमा जनयुद्धको समयमा काभ्रे जिल्लाको पाँचखालस्थित व्यारेकमा माओवादीको बिल्ला भिराएर एउटी निर्दोष बालिकालाई सेनाले अपहरणपछि बलात्कार गरेर हत्या गरिएको यथार्थ विषय उठाइएको छ । यो कथा एकदमै कारुणिक र मार्मिक लाग्ने छ यसले धेरैको मन छुने निश्चित छ । ‘बच्चा जन्मँदा’ कथा पारिवारिक विषय भएको कथा हो भने ‘म झनै भगवान्को भक्त भएको छ‘ु कथा भूकम्पको त्रासले गर्दा उत्पन्न मानसिक प्रभावको विषय उतारिएको कथा हो । ‘नेता’ शीर्षकको कथामार्फत नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ । त्यसैगरी ‘प्रेमिकालाई पत्र’ र ‘विचरा विनोद’ प्रेम विषयले अत्यन्तै भरिला कथा हुन् । ‘भ्रूणको हत्या नगरौं’ कथा शीर्षकले नै प्रष्ट छ । यसमा पछिल्ला दिनहरूमा वढ्दो गर्भपतनको विषय प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा यस्ता थुप्रै कथाहरू छन्, जसले समग्रमा “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू”लाई वास्तवमै सत्य सावित गरिदिएका छन् ।
कथा सङ्ग्रहको राम्रो पक्ष के छ भने यो पुस्तक जति पढ्यो त्यति नै पढौं–पढौं लाग्ने र अब यसपछि के होला ? भन्ने कौतुहल जगाउने खालका बनेको छ । यसमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूले गर्दा भविष्यमा यो एउटा ऐतिहासिक पुस्तक बन्ने सम्भावना बोकेको पुस्तक बन्नेछ भनी दाबी गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो एउटा पठनीय मात्र नभई सङ्ग्रहणीय कथा सङ्ग्रहको रुपमा पनिरहेको छ ।
समग्ररुपमा कथा सङ्ग्रह राम्रो छ यद्यपि केही कमी कमजोरीमा चाहिँ कुनै–कुनै कथाहरू अलि जो कोही पाठकले बुझ्न नसक्ने हो कि जस्तो भान पनि हुन्छ । यसैगरी लघुकथालाई पनि कथा मान्नु र खण्डकाव्यलाई पनि कथा मान्न खोज्नुले पाठकलाई भ्रममा पार्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । तर जे छन् जति छन् सन्देशमूलक नै छन् । सोचनीय पनि छन् । यसर्थ यो कथा सङ्ग्रह वास्तविकता जस्तै लाग्नेछ । उनले भनेझैँ मेरो वास्तविक विचारको उपजवाट जन्मेको भनेका छन् । उनका वास्तविक विचारहरू समाजका लागि उपयोगी र रोचक हुनेछन् जसका लागि पाठकले पक्कै पनि एक पटक यो पुस्तक किनेर पढ्न जरुरी छ ।
सङ्घर्ष सिकाउने सत्य कथाहरू
— रामजी बलामी
सत्य बोल्नेलाई पागल ठान्छन् यहाँ ।
सत्य बोल्नेलाई लगेर जाक्छन् यहाँ ।।
मिहिनेत परिश्रम गर्नेलाई दुःख मात्र दिई,
सबैको हित हेर्नेलाई लात हान्छन् यहाँ ।
समाजको यथार्थता बोल्ने देहायका हरफहरू कथाकार “विजय”को कथा सङ्ग्रह ‘सत्य सङ्घर्षका कथाहरू’बाट लिइएको हो । विभिन्न स्वादमा रहेका २८ वटा कथाहरूको सङ्ग्रह रहेको यस पुस्तकमा प्रेम, संवाद, भूकम्प, कानून, विज्ञान, आन्दोलन, सामाजिकलगायतका कथाहरू रहेका छन् । हरेक कथाले सामाजिक यथार्थता र चेतनाको दियो बाल्ने कोशिस गरेका छन् ।
पुस्तकमा समावेश पहिलो कथा ‘आमाको पुकार’मा आफूलाई जन्म दिने आमाको गुणगान र आमाप्रति पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूका वारेमा नैतिक शिक्षासहितका कुराहरू उल्लेख छन् । त्यस्तै ‘साइकलले घनिष्ठ बनायो’ कथामा एउटा साइकलले बढाएको मित्रता र मित्रताको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ । ‘इज्जतको बिहे’ कथामा इज्जतकै लागि बिहेमा गर्ने अनेक तरिकालाई व्यङ्ग्य शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै ‘इथिक्सको वैज्ञानिक चमत्कार’ कथामा आगामी १०००देखि ३,००० सालसम्मको कल्पना गरिएको छ । बढ्दो जनसंख्याका कारण उत्पन्न हुने मानवीय संकटलाई यस कथामा परिकल्पना गरिएको छ ।
त्यस्तै मातृभूमिप्रतिको दायित्त्व, जनयुद्धका क्रममा हत्या गरिएका ‘मैना सुनार’को कथाहरू पनि उल्लेख छ । ‘बच्चा जन्मँदा’ कथामा प्रसव पीडा र आफन्तका व्यवहारलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । ‘सल्किएपछि’ शीर्षकको कथामा अवैध बैवाहिक सम्वन्धमा समाज र परिवारलाई पार्ने नकारात्मक असरका वारेमा उल्लेख छ । नेता, विचरा विनोद, सविताको माया, विवेक, भ्रूणको हत्या नगरौं, लेखक र प्रकाशकलगायतका कथाहरू पनि रोमाञ्चक र शिक्षाप्रद देखिन्छ । ‘प्रेमिकालाई पत्र’ एकदमै प्रेमील अभिव्यक्ति प्रदर्शन गर्ने, अद्वितीय प्रेममा समर्पित पत्र–कथाका रुपमा सालिन रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण वुझ्न पुस्तकले खुराकको काम गरेको देखिन्छ । १० वर्षे माओवादी युद्धका क्रममा सेना र माओवादीले गरेको अत्याचारबाट जनताले पाएको सास्तीहरू पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ । यसका साथै २०४६/४७ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनका वारेमा वुझ्न पनि पुस्तक उपयोगी छ ।
समग्रमा पुस्तकले सबै क्षेत्र समेट्न खोजेकाले पनि होला कतिपय कथाहरू पढ्दै जाँदा लघुकथा, निवन्ध र लेख जस्तो आभास हुने गर्दछ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, समाजका विविध व्यवहारिक संरचना र मायाप्रेमका क्रममा देखापर्ने खुसी तथा पीडाहरूका वारेमा पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
गतिलो पाठशाला बन्नसक्छ
— राजन पनेरु
नेपाली साहित्यका उदाएका एक परिश्रमी लेखक बिजु सुवेदी “विजय” हुन् । कथा, लघुकथा, कविता, गीत, गजल, निबन्धलगायत विविध विधामा उनको कलम चलेको पाइन्छ । उनका विभिन्न विधामा लेखिएका करिव एक दर्जन जति पुस्तकहरू बजारमा आइसकेका छन् । पछिल्लो समय रत्न पुस्तक भण्डारले बिजु सुवेदी “विजय”को कथा सङ्ग्रह “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” बजारमा ल्याएको छ । पुस्तकभित्र प्रेम, संवाद, भूकम्प, कानून, विज्ञान, आन्दोलन, सामाजिकलगायत विभिन्न वर्गभित्र पसेर केलाइएका कथाहरू छन् । यी कथाहरूले नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएका छन् । कतै चोटिलो व्यङ्ग्य छन् त कतै चेतनामूलक सन्देशहरू छन् । कतिपय कथाहरू यति क्रान्तिकारी र भयानक छन् कि जहाँ बिजु सुवेदी “विजय” ज्वालामुखी बनी शब्दका रुपमा विष्फोट भएका छन् ।
“सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” पढ्दा के थाहा हुन्छ भने बिजु सुवेदी “विजय” धेरै मेहेनती, परिश्रमी र लगनशील छन्, विविध विषयमा उनले ज्ञान हासिल गरेका छन् साथै लेखनमा कत्ति पनि कञ्जुस्याइँ र अल्छी गर्दैनन् तथा सरल लेख्छन् । हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै इच्छा चाहना र रुचिहरू फरक–फरक हुन्छन् । त्यस्तै फरक–फरक स्वाद लिन चाहनेहरूले बिजु सुवेदी “विजय”को “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू”बाट मीठो साहित्यिक अनुभूति प्राप्त गर्न सक्छन् । पुस्तकलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा बिजु सुवेदी “विजय” राजनीति, समाज, प्रेम, क्रान्ति, धर्म, कानूनलगायत विविध विषयमा पोख्त छन् । उनको वौद्धिक क्षमता यस पुस्तकमा शब्दका रुपमा चुहिएका छन् । कथा अभिरुचि राख्ने मात्र नभएर कथा लेख्न चाहनेहरूलाई पनि “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” गतिलो पाठशाला बन्न सक्छ ।
‘मैना सुनार’ शीर्षकको कथामा शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको क्रुर मानवता विरोधी एक घटनाको चित्रण गरिएको छ । तर कथालाई कथाभन्दा अलि स्तम्भजस्तो बनाइएको छ । ‘बच्चा जन्मँदा’ शीर्षकको कथाले ‘सुख पर्दा सबैको हाईहाई दुःख पर्दा कोही छैनन् दाजुभाइ’ भन्ने नेपाली उक्तिलाई समेटेको छ, जहाँ यथार्थ नेपाली परिवेशलाई उठाइएको छ । ‘विचरा विनोद’ शीर्षकको कथाले दुई परिवार बीचमा हुने झगडा त्यसले निम्त्याउने परिणाम र सन्तानहरूमा पार्ने मनोवैज्ञानिक असर झल्काइएको छ । सालिन प्रेम र त्यसबाट छुट्दा हुने बेचैन मनस्थितिको पनि त्यहाँ चित्रण गरिएको छ । ‘सविताको माया’ शीर्षकको कथाले कुलतमा लाग्नु हुन्न कुलतमा लाग्नेको विश्वास हुन्न भन्ने कुरा दर्शाउन खोजेको छ । ‘विवेक’ शीर्षकको कथाले एक मजदुर बालकको कथा व्यथा बोकेको छ । साहूमहाजनबाट हुने थिचोमिचो र बढ्दै गरेको बेरोजगारीलाई यसमा उतारिएको छ । यसमा कसैगरी आफ्नो विवेक गुमाउनु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपाली समाजमा बढ्दै गएको भ्रूण हत्यालाई पनि यस पुस्तकमा ‘भ्रूण हत्या नगरौँ’ भन्ने कथामार्फत चित्रण गरिएको छ । कसैको सानो लापरवाहीले हुने भ्रूण हत्या र त्यसले एक बाबुलाई पार्ने मानसिक असरलाई पनि यस “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू”को ‘भ्रूण हत्या नगरौँ’ कथामार्फत देखाइएको छ । ‘साइकलले घनिष्ठ बनायो’ शीर्षकको कथाले वर्षौपछि भेट भएका साथीहरूको घनिष्ठता देखाइएको छ । जहाँ उनीहरूले पुरस्कारभन्दा साथीलाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । कथा सामान्य छ तर जीवन्त छ । ‘इज्जतको बिहे’ शीर्षकको कथाले नेपाली समाजमा हुने दाइजोजस्तो कुरीतिलाई उतारिएको छ । कसरी फैलँदैछ कुरीति ? भन्ने कुरा उठाइएको छ । ‘इथिक्सको वैज्ञानिक चमत्कार’ शीर्षकको कथाले तीब्र जनसँख्या वृद्धिले भविष्यमा आउन सक्ने भयावह स्थितिप्रति सजग गराइएको छ । यसबाट कथाकारले भविष्यप्रति अहिलेदेखि नै सजग हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएका छन् । ‘डल्ले र डल्ली’ कथामा डल्ले र डल्लीजस्ता अल्छी पात्रको माध्यमबाट कथाकारले यस पुस्तकमार्फत नेपाली अल्छी जीवनशैलीको चित्रण गरेका छन् । काठमाडौँको जाम छिचोल्दै एक वेरोजगार युवाले जागिरमा अन्तर्वार्ता दिन जान गरेको सङ्घर्ष, ऊ भित्र भएको बेचैन र उसको व्यर्थको लगावलाई निकै कलात्मक ढङ्गले ‘मीठो प्रतीक्षा’मा उतारिएको छ । नेपालमा प्रकाशकले लेखकप्रति गर्दै आएको अव्यवहार, अन्याय र वौद्धिक चोरीका कुराहरू पनि ‘लेखक र प्रकाशक’ कथामा संवाद शैलीद्वारा उतारिएको छ ।
बिजु सुवेदी “विजय”सँग कथाका विषयवस्तुहरू पनि प्रशस्त छन्, धेरै क्षेत्रको विविध विषयमा ज्ञान पनि छ, त्यसलाई बुनेर मीठो बनाएर पस्कने शैली अलि कम जस्तो छ त्यसैले लेखकले मिठासतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कथा लेखक स्वयंलाई मात्र नभएर पाठकको लागि पनि हुनुपर्दछ । हरेक कथाले सन्देशमूलक मात्र भएर पुग्दैन पाठकको ध्यान अन्त्यसम्म खिँच्नसक्ने बुनोट पनि हुनुपर्दछ ।
यस पुस्तकको मुख्य कथा जुन यस पुस्तकको शीर्षक पनि राखिएको छ “सत्य सङ्घर्षका कथाहरू” जसमा माओवादी द्वन्द्वको विषयलाई उठाइएको छ । यस मूल कथाले उठान गर्न खोजेको विषय धेरै राम्रो र धेरै महत्त्वपूर्ण भएर पनि कथा र पात्रभन्दा कथाकार हावी भएको जस्तो भएकोले कथाको महत्त्वलाई अलि खस्काउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो कथाभन्दा स्तम्भतिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ । बिजु सुवेदी “विजय”का कथाहरू निकै जोशिला र क्रान्तिकारी छन् । उनका कथाहरूले पाठकलाई मुठ्ठी उचालेर आन्दोलनमा प्रेरित गर्न सक्षम छन् । १९दिने जनआन्दोलनलाई पनि उनले यस कथामा निकै नजिकबाट केलाएर प्रस्तुत गरेका छन् जुन कुराहरू भविष्यमा एक अमिट इतिहास बन्नेछ । पाठकहरूले जनआन्दोलनलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसर पाउने छन् ।
कुरामा चाल्नो लगाउने कला
विश्व सामु अटल नेपाल